Coinbase u fidiya in Japan
Coinbase ayaa ku dhawaaqday qorshe ay ku abuurtaan xafiis ee Japan. In lagu dhawaaqay, Coinbase ayaa sheegay in ay la FSA Japan waxaa ka shaqeeya si loo hubiyo in waafaqsanaanta sharciga ah marxalad kasta iyo mar ansixiyay, ayaa qorshaynaysa in ay bixiyaan alaabta iyo adeegyada ay tahay in dadka ku Japan.
Soo Dhaweysay Hogaamiyaha Fintech Nao Kitazawa
Iyadoo qayb ka ah dadaalka our si loo dardar-dhigidda caalamiga ah ee cryptocurrency, maanta waxaan ku dhawaaqay furitaanka of Coinbase ee xafiiska ee Japan. Under hogaanka hogaamiyaha fintech aadka loo ixtiraamo oo la jecel yahay, Nao Kitazawa, xafiiskayaga cusub aasaaska u dhigi doontaa maal crypto Japan ayaa si ay u helaan kala duwan oo ka mid ah waxyaabaha Coinbase ee. Sida suuqyada kale, waxaan qorshaynaynaa in ay qaataan hab ula kac ah in fulinta our ee Japan, taas oo macnaheedu yahay gacanta-in-gacantiisa ku FSA Japan ka shaqeeya si loo hubiyo inay waafaqsan tahay sharciyada maxalliga ah marxalad kasta.
Brazil waxaa furitaanka xisaab ka badan ganacsiga crypto badan xisaab dilaalista dhaqanka
Dad badan ayaa la furo xisaab ganacsiga cryptocurrency ee Brazil ka badan xisaab dilaalista dhaqanka.
Sanad ka hor, sarrifka lagu magacaabo Foxbit qallafsan lahaa 100,000 users diiwaangashan. maanta, waxay leeyihiin 400,000 users diiwaan out of qiyaasey ah 1.4 million in xisaab-furay iyaga iyo saddex tartamayaasha ugu weyn kula waqti yar ka badan laba sano. Isbarbardhigga in si qallafsan ayuu ugu 600,000 kuwaas oo xisaab dilaalista stock waana Caraabaah si aad u aragto: Brazil ayaa helay cryptocurrency. In 2016, Brazil dhaqaaqay $160 milyan oo oo ka mid ah Seeraar. Sanadkii la soo dhaafay, waxaa ka dhacay agagaarka $2.4 billion.
"Waayo, guys, kuwaas oo loo isticmaalo si ay u qariyaan dollars hoos joodariyaasha ay, hadda waxay ku dhuumanayaan Seeraar,"Ayaa sheegay in Eduardo Ferreira, oo madax ka ah horumarinta ganacsiga caalamiga ah ee Foxbit ee London. "Waa ardayda u iibsato. Waa darawallada 60-sano jir ah bas,"Ayuu yidhi.
Report Kraken Daily Market for 04.06.2018
$150M baayacmushtari jireen dhamaan suuqyada maanta
Chainalysis - Shirkadda wax baabbi'inayay ku Seeraar magaciisa ku
In co ugu horumaray ...